တရုတ်နိုင်ငံ၌ ငွေလုံးငွေရင်းတိုးတက်မှု ကောင်းမွန်စေရေး ရှီက အလေးထားပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတနှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ရှီကျင့်ဖိန်က ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် မြို့တော်ပေကျင်း၌ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အခမ်းအနားတွင် အရေးကြီးမိန့်ခွန်းအား ပြောကြားခဲ့စဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဧပြီ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ CPC ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ရှီကျင့်ဖိန်က နိုင်ငံအတွင်း ငွေလုံးငွေရင်းတိုးတက်မှု ကောင်းမွန်စေရေး ကို ဥပေဒနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ရန်နှင့် လမ်းညွှန်ရန်၊ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးပါသောအခြေခံအကြောင်းအရာအဖြစ် ငွေလုံးငွေရင်း၏ အပြုသဘောဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် ဧပြီ ၂၉ ရက်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရှီသည် CPC ဗဟိုကော်မတီ၊ နိုင်ငံရေးဗျူရို၏ အဖွဲ့လိုက်လေ့လာရေးအစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်း၌ အဆိုပါမှတ်ချက်အား ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
BEIJING, April 30 (Xinhua) — Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, on Friday called for efforts to regulate and guide the healthy development of capital in China in accordance with the law and give play to the positive role of capital as an important factor of production.
Xi made the remarks while addressingagroup study session of the Political Bureau of the CPC Central Committee. Enditem